Linux Mint inotanga kukura kweLinux Mint 19 uye LMDE 3 | Linux Vakapindwa muropa
Linux Mint inotanga kuvandudza Linux Mint 19 uye LMDE 3
Munguva ino yezororo, vagadziri vazhinji vanotora mukana wekushandisa nguva nevanhu vavo, asi kune mapurojekiti anoenderera mberi. Imwe yemapurojekiti iLinux Mint. Mutungamiri weprojekti Clem Lefebvre akazivisa kutanga kwekuvandudzwa kweLinux Mint 19 uye LMDE 3. Shanduro dzinotevera dzemapurojekiti ake akatsiga.
Linux Mint 19 ichave iri vhezheni inoda basa rakawanda kupfuura zvakajairwa nekuti ichave yakavakirwa paUbuntu 18.04 Bionic Beaver, inotevera LTS vhezheni yeUbuntu. LMDE 3, zvakadaro, ichave inoenderana neshanduro dzeDebian dzazvino, shanduro dziripo kare kusiyana neUbuntu 18.04.
Iyo Linux Mint timu yakagara yasarudza kusarudza iyo LTS shanduro dzeUbuntu sehwaro hweshanduro dzadzo. Nekudaro, Linux Mint 18, 18.2 uye 18.3 yakavakirwa paUbuntu 16.04. Iyo inotevera vhezheni ichave yakavakirwa paUbuntu 18.04, iyo nyowani LTS vhezheni uye imwe yeshanduro iyo ichave neshanduko zhinji uye kushanda. Hatifanire kukanganwa izvozvo Linux Mint inoshandisa Cinnamon seyakasarudzika desktop uye Ubuntu 18.04 ichaunza Gnome sedhatemendi redesktop. Iko kernel shanduko ichave zvakare iri hombe kusvetuka pamwe nemamwe akawanda mashandiro uye mabasa ayo Linux Mint ane uye Ubuntu 18.04 ichave isina.
Iyi nhanho yekuvandudza ichave yakareba uye iine budiriro diki, zvirinani kusvikira yakagadzikana uye yekupedzisira vhezheni yeUbuntu 18.04 LTS yabuda. Panguva ino, tinogona kutaura kuti isu tatova neruzivo nezve Linux Mint inowanikwa mumitauro yakati wandei, chimwe chinhu chisiri chitsva asi chiri. kushandurira mumitauro mishanu zvisati zvatsigirwa neLinux Mint.
Linux Mint 19 haizove neiyo KDE vhezheni sezvatakambotaura, kunyangwe shanduro dzekare dzicharamba dzichigamuchira zvigadziriso uye dziine rutsigiro. Asi, LMDE 3 ichave inotenderera kuburitsa kugovera iyo iri pamusoro paDebian uye nekudaro, kana isu tine vhezheni yapfuura, isu hatizodi kuisa LMDE 3 asi zvichave zvakakwana kugadzirisa iyo vhezheni yatinayo.
Chero zvazvingava, zvinoita sekudaro kusvika Chivabvu 2018 hatizove neshanduro nyowani dzeLinux Mint pamakomputa eduEhe, muna 2018 isu tichaenderera nekuve neshanduro nyowani dzeLinux Mint.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Mint inotanga kuvandudza Linux Mint 19 uye LMDE 3
Nei vachidonhedza iyo KDE vhezheni muMint 19? Ndiri pakati pekuenda kuUbuntu 18.04 LTS kana Mint asi ini ndinochida ne KDE ...
Iwe unogona ipapo kusarudza KDE Neon, iyo yakavakirwa pane iyo LTS shanduro dzeUbuntu zvakare, parizvino yakavakirwa pa16.04 uye inotevera vhezheni ingangove yakavakirwa paUbuntu 18.04.
Iyo LMDE 3 chinhu haina kunyatsoita mushe. Nehurombo, kunze kwekunge paine shanduko yandisingazive kana paminiti yekupedzisira, LMDE 3 haizove neMate vhezheni, saka avo vari kushandisa LMDE 2 Mate vanozopedzisira varaswa.
Kugadziridza? Ehezve, iyo nzira kubva kuLMDE1 kuenda ku2 yakanga isiri nyore senge nzira kubva pa18.3 kusvika 19.1 inogona kuva sezvo ichingova inotevera neinotevera; Panzvimbo iyoyo, zvaive zvakafanira kushandura zvinyorwa (gadziridza iyo faira) uye kugadzirisa kuburikidza neterminal. Muzuva rayo, dai paive neiri Mate uye Cinnamon vhezheni, ikozvino zvinoita sekunge kuchangove neCinnamon, chete makumi matanhatu nemasere? Tichafanira kuona.
Inogona kunge iri yeLinux Mint 19, LMDE 3 ndinofungidzira kuti ichaburitswa muna Gumiguru kana Mbudzi sezvo timu yeLinux Mint ichikoshesa iyo Ubuntu vhezheni uye, ichaburitswa neCinnamon, Mate uye Xfce, saka LMDE 3 ichave iri yekupedzisira. Uye ndinofara Betsy ane hupenyu hwakawanda kubvira pandinoishandisa naMate
Pazuva rakaita nhasi Ian Murdock akatisiya